सबै नेपालीलाई बैंक खाता अभियान वित्तीय पहुँचको आधार | Chhinchhin Khabar
सबै नेपालीलाई बैंक खाता अभियान वित्तीय पहुँचको आधार
२ बैशाख २०७६, सोमबार १०:१९
काठमाडौं– विक्रम संवत् २०७६ को पहिलो दिन, आम नेपाली नयाँ वर्षको स्वागतमा रमाइरहेका थिए। चैत–वैशाख, वसन्त ऋतु अर्थात् बोटबिरुवामा समेत नयाँ कोपिला लाग्ने मौसम। यही अवसरमा सरकारले नववर्ष कै दिन देखि नयाँ अभियान शुरु गरेको छ । सरकारले नयाँ वर्ष पहिलो दिन नै देशैभर ‘खोलौँ बैंक खाता’ अभियान शुरु गरेको हो । ‘समृद्धिसँग जोडौँ नाता सबै नेपालीको बैंक खाता’ भन्ने नाराका साथ अभियान शुरु गरिएको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सबै नेपाली नागरिकको बैंक खाता खोल्ने अभियान नै चलाउने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । सोही कार्यक्रमलाई सफल बनाउने लक्ष्यका साथ आजदेखि सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान शुरु भएको हो । वित्तीय रुपमा नेपाली नागरिकलाई सबल, सक्षम एवम् जागरुक बनाउने र सबै आर्थिक कारोवार बैंक खातामार्फत गर्ने गरी अभियान शुरु गरिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वित्तीय साक्षरतालाई जोड दिँदै सबै नेपाली यस अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको शब्दमा ‘पहिले पहिले थैलीका दिन थिए । अब चेकका दिन आए ।’
यस्तै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पनि सबै नेपालीको बैंक खाताले वित्तीय पुहँच स्थापित हुने बताए । सबै नेपालीलाई सरल रुपमा वित्तीय पहुँच कायम गर्ने लक्ष्यका साथ २८ वटै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले बैंक खाता खोल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई बैंक खाता खोल्नका लागि सहजीकरण गर्नेछ । सरकारको आग्रहअनुसार नै बैंकले नयाँ खाता खोल्नेलाई रु एक सय सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उपलब्ध गराउनेछ । सो अभियानअन्तर्गत बैंक खाता खोल्दा कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । बरु बैंकले नै त्यस्ता खातावालालाई रु एक सय उपलब्ध गराउनेछ ।
शहरी क्षेत्रमा विशेषगरी रोजगारी तथा अध्ययन, व्यापार–व्यवसायमा संलग्नले अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोलेका छन् । एकै व्यक्तिको पनि दुईभन्दा बढी बैंक खाता छन् । तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल नेपालीको जनसङ्ख्या करीब दुई करोड ९० लाख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दुई करोड ६८ लाख खाता खुलेका छन् । यस आधारमा हेर्दा कूल जनसङ्ख्याको थोरैको मात्र बैंक खाता नभएको जस्तो देखिन्छ ।
तर यर्थाथ भने फरक छ । एकै व्यक्तिका धेरै बैंक खाता छन् । ग्रामीण तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा बैंक खाता खोल्नुपर्छ भन्ने चेतनासमेत पुगेको छैन । बैंक खाता खोल्न रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीका अनुसार बैंक खाता खोल्नका लागि सहजीकरण गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सहजीकरण गर्दै नयाँ कार्यक्रम शुरु गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरुले पनि बैंक खाता खोल्ने सरकारको अभियानमा साथ दिने गरी आवश्यक प्राक्रिया अगाडि बढाएका छन् । एनआइसिएशिया बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनसिसी बैंकले विभिन्न नाम दिएर खाता खोल्ने अभियान यसअघि नै शुरु गरिसकेका थिए । नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार वित्तीय रुपमा सबै नेपाली नागरिकलाई जागरुक बनाउँदै बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन बैंक खाता अभियान महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।
सो कार्यक्रममा २८ वटै वाणिज्य बैंक सहभागी छन् । खाता खोल्नका लागि सरल र सहज प्रक्रिया मिलाइएको ढुङ्गानाको भनाइ छ । एनआइसिएशियाले त सोही अभियान सँगै ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत सबै नेपालीलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाले हितग्राही खाता जरुरी रहेको छ ।
नयाँ खाताका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये आफूसँग जुन उपलब्ध छ, त्यही लिएर बैंकका शाखामा जानुपर्नेछ । यस्तै स्थानीय तहले प्रमाणित गरी उपलब्ध गराएको फोटोसहितको सिफारिस वा पहिचान पत्रबाट पनि सजिलै बैंक खाता खोल्न सकिनेछ ।
Previous articleपृथ्वी जोगाउन भूमिका खेल्ने विश्वका ५ मुलुक
Next articleकेन्याको डान्सबारेमा नेपाली युवती
पाँचौ दिनको खेलमा सुर्खेत र साहरा एफसी लखनउ विजयी
कोरोनाको अनुसन्धान गर्न डब्लूएचओको टोली वुहानमा
सेवा विस्तार गर्दै रेडक्रस
श्याम थापा स्मृति फुटबल प्रतियोगिताः धम्बोझी र साहारा विजयी
डोनाल्ड ट्रम्पविरूद्धको महाअभियोग तल्लो सदनबाट पारित
नेकपा विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ
‘प्राधिकरणले नियतवश बदमासी गरेको भए कर्मचारीलाई कारवाही गर्नू’
सैनिकमा सुरु भयो ‘श्याम थापा स्मृति फुटबल प्रतियोगिता’
बैंक मर्जरः दुई बैंकमा लगानी भएपनि क्रस होल्डिङ मानिने
शनिबार कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन, डा. रिजाल नेपालगन्जमा
नेपालगन्ज- नेपाली कांग्रेसले शनिबार गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र...
नेपालगन्ज– बाँकेमा संचालन भइरहेको प्रथम स्वर्गीय श्याम थापा प्रथम स्मृति फुटबल प्रतियोगितामा गुर्वाकोट क्लब, सुर्खेत र...
काठमाडौं– गोरखा भूकम्पपछि देशका विभिन्न बीस स्थानमा ‘भूकम्प मापन स्टेशन’ निर्माण गरिएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको गोरखा भूकम्पपछि...
बाँकेमा क्षतविक्षत अवस्था रहेको शव फेला
नेपालगन्ज– बाँकेमा क्षतविक्षत अवस्थामा शव फेला परेको छ । नेपालगन्जस्थित कारकाँदो मेरीगोल्ड स्कुलदेखि १०० मिटर पूर्वमा उक्त...
बेइजिङ–कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को टोली चीनको वुहान पुगेको छ । दश जना वैज्ञानिकको टोलीले विभिन्न अनुसन्धान संस्था,...
टिकापुर घटनामा माओवादी लडाकुको संलग्नता खुल्यो